Santa Lucia, ọkọchị n'afọ niile | Akụkọ Njem
Saint Lucia, ọkọchị n'afọ niile
Mariela Carril | | Nduzi, Saint Lucia
Anyanwụ, oké osimiri, okpomọkụ na ọdịdị paradaịs mebere kaadị kacha mma nke ezumike a na-agaghị echefu echefu na a ndụ enviable ... Luckily na ụwa nwere ebe ọ bụ oge ọkọchị n’afọ niile ma otu n’ime ha bụ agwaetiti nke Saint Lucia.
Ọ bụrụ na ịchọrọ echiche nke ezumike Caribbean na ihe niile m kọwapụtara (tinye nsị, mmiri mmiri, ugwu, osimiri, iyi mmiri, na ịnya ịnyịnya), mgbe ahụ obere agwaetiti a kwesịrị ịdị na ụzọ njem gị. Lee ihe niile ozi ị chọrọ iji wuchaa njem:
2 Otu esi aga Santa Lucia ma gafee agwaetiti ahụ
3 Ihu igwe na akwụkwọ ego na Saint Lucia
4 Ihe ị ga-eme na Santa Lucia
Ọ bụ akụkụ nke Windward Islands, na Obere Antilles ọ dịkwa n’etiti Saint Vincent na Martinique, n’ebe ugwu nke Barbados. Ndi Arawak bu ndi mbu ha ma Ndị Europe rutere na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, mmalite nke XNUMXth. Ọ bụ ezie na ndị France bu ụzọ mee ya, na-ebute ndị Africa na ndị ohu ka ha kọba okpete, ọ bụ n’ikpeazụ ka ndị Britain fọdụrụnụ nwere ike ịchịkwa agwaetiti ahụ.
Ọ bụ ya mere taa Saint Lucia bụ akụkụ nke British Commonwealth ọ dịkwawo onwe ya kpam kpam kemgbe 1979. O nwere mpaghara ala ugwu dịka o sitere na mgbawa ugwu, ya mere n’etiti ugwu enwere ndagwurugwu na-eme nri na ụsọ mmiri. Isi obodo ya bụ Castries, ma e nwere obodo anọ ọzọ dị mkpa. Àgwàetiti ahụ yiri nke ube oyibo, ma ọ bụ mango na mgbe Oké Osimiri Atlantic na-asachapụ n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ya ndị nke ọdịda anyanwụ ka Oké Osimiri Caribbean na-asacha.
Otu esi aga Santa Lucia ma gafee agwaetiti ahụ
Ọ nwere ọdụ ụgbọelu abụọ: Hewanorra International Airport na Vieux Fort na George FL Charles nke dị nso na Castries. American Airlines, Air Jamaica, Air Canada, Virgin Atlantic, British Airways, Delta, bụ ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị na-efe mgbe niile.
Isesgbọ mmiri bịakwara n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Pointe Seraphine, ọ bụ ezie na ọdụ ụgbọ mmiri bụ nke Castries, na nke Vieux Fort bụkwu ibu. Kedu ka ị ga-esi gafee agwaetiti ahụ? Enwere ụgbọ aladị gburugburu ugwu nke agwaetiti ahụ, gburugburu Castries na Gros Islet, ruo elekere iri nke ụtụtụ, ma enwekwara minibuses ruru ihe ruru mmadụ iri na Tagzi.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgagharị n'agwaetiti ndị ahụ enwere ụlọ ọrụ catamaran, ferries na charters ka ihe atụ rute Rodney Bay, Marigot Bay, Dominica, Guadeloupe, Martinique ma ọ bụ Grenadines. Ma n'ezie enwerekwa ụgbọ elu.
Ihu igwe na akwụkwọ ego na Saint Lucia
Nwee ihu igwe iru mmiri subtropical na jụụ ifufe ịfụ nile n'afọ ogologo. Ee n'ezie, n’agbata June na November, mmiri ga-ezo. Oge oyi dị nkụ ma ọ dị mma iweta ihe na-ekpo ọkụ.
Ego ebe a bu Eastern Caribbean dollar, dabere na dollar US na ọnụego mgbanwe gị, na ọnụego 2 EC $ kwa dollar. A na-akwụ ụtụ isi nke EC $ 65 dị ka ụtụ isi ọpụpụ agwaetiti. Ugbu a bụ 220 volts na 50 okirikiri ma ụfọdụ ụlọ nkwari akụ nwere 110 volts na 60 cycles. Ihe plọg ahụ bụ prong atọ, ọkọlọtọ Britain.
Kedu asụsụ ha na-asụ ebe a? Bekee, mana French-patois na-asụ ebe niile.
Ihe ị ga-eme na Santa Lucia
Ọnụ ụzọ Santa Santa bụ Ihe nkedo. Ọ bụ obodo mara mma nke French, malitere na 1650, ebe ihe dị ka puku mmadụ iri bi ugbu a. O nweghi otutu nlegharị anya, ọ bụ ebe a gafere, ma n'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụrụ na ịnọ ụbọchị ole na ole, ị nwere ike ịga leta ya akụkọ ihe mere eme ụlọ na yi Jeremy Street Market.
A na-akpọ isi obodo ochie Soufriere ma ị nwere ike ịba bọs site na Castries. Ọ bụ ebe Ugwu ugwu, na ugwu mgbawa, yabụ ihe a na-emebu bụ ime ugwu ahụ site na enyemaka nke onye ndu. E nwere Pitons Falls, dịkwakwa ụzọ nke ya, ma enwere ụzọ nke na-arịgo na ala na-ahapụ gị na Anse chastanet, osimiri mara mma ma di jụụ.
I nwekwara ike banye na ala ugwu, gaa na nsụda mmiri mmiri ma ọ bụ ọnụ ugwu ma ọ bụ gaa na shuga ochie na koko.. Na Soufriere enwere ọtụtụ họtel. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji tagzi si na Castries rute ebe ahụ, ọ ga - ekwe omume mana ọ ga - efu gị ihe ruru $ 100 kwa njem.
Ma ị chọghị obodo ma osimiri? Mgbe ahụ osimiri ndị dị n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ kachasị mma n'ihi na Oké Osimiri Caribbean na-asacha ha. N'ebe a ọ bụ Marigot n'ọnụ mmiri, nke gbara ugwu gburugburu, nke ọtụtụ mmadụ na-akpọ «Ndị kasị mma nke Caribbean».
Lee enwere ọtụtụ ebe ntụrụndụNwere ike ịhọrọ ibi n'otu n'ime ha, yana ụlọ obibi nke onwe. Ọ bụ ọdọ mmiri miri emi nke na-ezochi ihu igwe mgbe niile. Taksị mmiri anaghị akwụ ụgwọ yabụ ọ dị mfe ịgagharị. N'elu ugwu bu obodo Marigot na echiche ya, chee, di ebube.
Ihe dị ka nkeji oge 20 site na Castries bụ Ogige Rodney. Ọ bụ otu nnukwu njem nleta nke Saint Lucia na ya ntụrụndụ isi. Gburugburu mmiri a na-etinye obodo mepere emepe na ya hotels, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ebe ntụrụndụ, ụgbọ mmiri mara mma, ụlọ ahịa na ụlọ ịgba egwu abalị. Ọ bụ obodo kwa ụbọchị, na-enwekarị mmegharị nke ụlọ akụ na azụmaahịa na ebe a na-azụ ahịa, mana enwekwara ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'okporo ámá, ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ mmanya na ọtụtụ ọmarịcha saịtị. Ọ bụ ịga ije.
Ndụmọdụ m bụ ka ị gaa Santa Lucia were ego n'ihi na ị ga-achọ ime ihe niile enyere gị: ịnya ịnyịnya, kayak, ụgbọ mmiri, njem njem azụ, ịkọ mmiri, njem ụgbọ mmiri (okpu agha ndị ị nwere ike iji wee kuru mmiri n'okpuru mmiri), akwụkwọ ọgụgụ snuba (Nchikota nke ndakpu mmiri na mmiri), ikiri whale na dolphins, kitesurfing ma obu Igwe mmiri, ikuku mmiri, mmiri na-agba mmiri ma ọ bụ naanị sunbathing, igwu mmiri na ịnụ ụtọ.
N'ikpeazụ, Gros Islet bụ obodo dị na nsọtụ ugwu nke agwaetiti ahụ nke nwere ọtụtụ osimiri mara mma na ọtụtụ ebe ntụrụndụ ndị njem. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime osimiri ya na-eche ihu na Atlantic, ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nwoke na-amaghị nwoke ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ ebe dị omimi, ọ bụ ezigbo mma. Bus ga-eji bọs si Castries rute.
Osimiri kacha mma? Belata osimiri, maka ọtụtụ ndị kachasị mma. Ọ bụghị ọnụ ma na oke ndịda, a na-enwekarị oriri na ngwụsị izu. Enwere Ogwe na ájá ma ị nwere ike ịme ntụrụndụ. I nwere ike igwu mmiri ma mee egwuregwu mmiri. I si na Reduit Avenue banye wee banye na Rodney Bay. Osimiri ọzọ mara mma bụ nke Agwaetiti pigeon, obere agwaetiti nke jikọtara ya na akwa mmiri gaa agwaetiti ahụ. Na-akwụ ụgwọ mbata n'ihi na ọ bụ ogige, EC $ 13, 35.
Ọkara n'etiti Castries na Soufries bụ Anse cochon, 200 mita nke aja aja na ọ fọrọ nke nta kpokọtara gbara ọhịa. A na-enweta ya site na steepụ nke nzọụkwụ 166! Ọzọkwa nzube Anse Castanet na Anse des Pitons. Na njikere. N'ezie, osimiri gị ga-adabere kpamkpam na họtel gị, mana mgbe ị na-agagharị, ịnwe nke ọ bụla n'ime ndị a gụnyere na njem gị bụ nke kachasị mma. .B. ezumike na Saint Lucia mgbe ahụ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Saint Lucia » Saint Lucia, ọkọchị n'afọ niile
Ihe a ga-ahụ n’obodo Fez
Curiosities nke Paris ga-ahapụ gị ikwu okwu